एसियाकैं धनि मुकेश अम्बानीसँग विवाह गर्नुपुर्व नीताले राखेकी थिइन यस्ता शर्तहरु ?
बुधबार २५ पुस, २०७५
काठमाडौं । मुकेश अम्बानी लामो समयदेखि चर्चामा रहँदैं आएका छन । विश्वका सफल व्यापारिहरुको सुचिमा तथा एसियाका धनि व्यक्तिको सूचिमा रहेका मुकेश अम्बानीको जीवनका बारेमा चासो नभएका मानिस कमैं होलान् ? मुकेश रिलायन्स कम्पनीसँगै आलिसान महल, कार, निजी विमान र सम्पत्तिका कारण चर्चामा आइरहन्छन् भने उनकी श्रीमती नीता अम्बानी सुन्दरता,दैनिक जीवनशैली, महँगो चिया, व्यायाम , पहिरन र नृत्यका कारण सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चार माध्यममा चर्चाको विषय बन्ने गर्छिन् । जसका कारण मानिसहरु उनीहरु बारे जान्न थप उत्साहित हुन्छन् ।
एउटा भनाई छ जोडी भगवानले स्वर्गबाट नै बनाएर पठाएका हुन्छन् । नीता र मुकेशको जोडी पनि यस्तै छ । सामान्य परिवारमा जन्मिएकी नीतालाई धीरु भाईले बुहारी बनाउने प्रस्ताव गरेको प्रशंग निकै रोचक छ । रिलायन्स कम्पनीका संस्थापक धीरु भाई अम्बानी आफैले बिन्डला ग्रुपद्वारा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा पहिलो पटक नीतालाई देखेका थिए ।
नीताका पिता उक्त कम्पनीमा कार्यरत थिए । कार्यक्रममा नीताको प्रस्तुतीले प्रभावित भएका अम्बानीले नीतालाई बुहारी बनाउने बारेमा सोचिसकेका थिए । उनले कार्यक्रमको अन्तिममा नीताका पिताको नम्बर लिएर आफै उनीहरुलाई सम्पर्क गरेका थिए ।
रिलायन्स कम्पनीका संस्थापकले आफूजस्तो सामान्य परिवारकी युवतीलाई विवाहको प्रस्ताव राख्दा सुरुमा नीतालाई मजाक जस्तै लागेको थियो । धीरु भाईले नम्बरको माध्यमबाट नीताको परिवारमा विवाहको प्रस्तावको बारेमा कुरा गरेका थिँए ।
घरमा कुराकानी भएपछि उनी अम्बानीको घर गइन् । उनी अम्बानीको घर पुग्दा मुकेश अम्बानीले ढोका खोले । बारम्बार पिताबाट नीताको बारेमा सुनेका मुकेशले पहिलो पटकमैं उनलाई चिनजान गर्न भ्याए । छोटो समयमा नैं उनीहरु विवाहको लागि तयार भएका थिँए ।
पहिलो भेटघाटसँगैं नीता र मुकेशको भेटघाट बाक्लिदैं गयो । एक अर्कालाई मन पराउन थाले, मुकेशले नीतासँग विवाहको प्रस्ताव राखे । तर, नीताले विवाह गर्नुअघि शर्त राखिन् । नीता विहे गर्नुपुर्व एउटा सामान्य स्कुलमा बालबालिकालाई पढाउँथिन् । जहाँ उनको तलब मात्रै ८ सय थियो ।
बिहेपछि पनि उनी उक्त कामलाई निरन्तरता दिन चाहान्थिन् किनकी उनलाई पढाउने रहर थियो । साथै, उनी आफ्नो पढाईलाई निरन्तरता दिन चाहान्थिन् । उनले विहेपछि सबैभन्दा धनि घरकी बुहारी बनेपनि सामान्य जीवन जिउन पाउनुपर्ने र उनले गरिरहेको जागिर नछोड्ने आफ्नो इच्छा रहेको बताएकी थिइन । उनको शर्तलाई मुकेश अम्बानीले सहजैं स्वीकार गरे । एजेन्सी